Modern Combat 5, ny fiheverana voalohany anay. | Vaovao IPhone
Modern Combat 5, ny fiheverana voalohany anay.
Ny iray amin'ireo lalao andrasana indrindra amin'ny taona dia hita ao amin'ny App Store. Araka ny nambaran'i Gameloft, Modern Combat 5 dia azo sintonina avy amin'ny App Store ankehitriny ary manome izay rehetra natolotray azy taloha, miaraka amin'ny sary nohatsaraina, tsy misy fividianana ao anaty rindrambaiko ary lalao filalaovana izay mbola mamela be faniriana, izay tsy maintsy ampidirintsika fa ilaina ny fifandraisana data maharitra mba hahafahantsika milalao. Efa nanandrana izany izahay ary milaza aminao ny hevitray.
Tsy azo lavina fa miatrika lalao tena izy isika. Modern Combat 5: mahagaga ny eo an-tanantsika ny delestazy ho an'ny iPhone sy iPad. Mahavariana ny sary, ny fahombiazany amin'ny iPhone 5 dia miavaka, tsy misy fihemorana na fanidiana tsy ampoizina, ary ny tantara dia noforonina tsara ho an'ny lalao amin'ity karazana ity. Misy fomba lalao maromaro, ny maody tantara mahazatra izay anarahanao ny fitantaran'ny lalao, maody multiplayer an-tserasera hizaha toetra ny tenanao amin'ny namanao na amin'ny mpifaninana aminao manerantany na ny maody Hetsika miaraka amin'ny iraka ataon'ny tsirairay na ny ekipanao Misy endri-tsoratra efatra hafa koa azo isafidianana izay azonao hatsaraina rehefa mahazo isa traikefa sy zava-bita ianao, manatsara ny fahaizany sy ny fitaovam-piadiany. Hatreto dia tonga lafatra sy mampanantena ny zava-drehetra, ary ny tena izy dia toy izany, saingy mahita ny tenantsika miaraka amin'ireo lesoka mahazatra isika.
Ahoana no fomba hafa, ny gameplay dia simba tanteraka amin'ny maody fifehezana ny toetra amam-panahy. Mila milalao be dia be amin'ireto karazana lalao ireto ianao hahafahanao mifehy tsara ny toetra amam-panahy, mampihetsika azy raha manondro sy mitifitra ianao, manova fitaovam-piadiana, mamerina ... ireo asa manangona ankihibe roa. Tsy takatra fa tsy mifanaraka amin'ny mpamily MFI, na dia nahita ny hitako aza aho dia heveriko fa tsy hisy fahasamihafana be koa.
Misy teboka ratsy iray hafa izay tsy mihatsara amin'ny fiofanana: ny fifandraisana amin'ny Internet. Manana iPad WiFi ve ianao? Aza adino ny milalao Modern Combat 5 raha tsy mifandray amin'ny tamba-jotra. Ny fifandraisana internet dia tsy maintsy maharitra afaka mankafy ny lalao video. Ary tsy hoe raha tsy misy ny internet dia hihena, ny tsy ahafahanao milalao mivantana. Ary koa, miankina amin'ny fifandraisanao amin'izao fotoana izao, lava loatra ny fiandrasana indraindray.
Mahamenatra satria ireo kilema roa ireo, indrindra fa ity farany ity, dia manao lalao mendrika ny isa ambony indrindra amin'ny fiheverana fa tsy miresaka konsolin'ny lalao ho avy isika, dia mahazo isa ambany kokoa, ary noho ilay tsy manana fividianana namboarina -dia manampy amin'ny fampidinana azy. Eny tokoa, Modern Combat 5: Blackout dia tsy mividy in-app, mandoa indray mandeha ianao ary mankafy ny lalao feno, izay ankasitrahana. Mazava ho azy, miatrika lalao 5,99 € isika.
Raha fintinina, tsiro mangidy be ilay mandao ity fizarana Gameloft vaovao ity. Ny sasany amin'ireto bibikely ireto dia mety ahitsy amin'ny fanavaozana ho avy. Na izany na tsy izany, raha mpankafy ny FPS ianao ary nilalao ny Modern Combat teo aloha dia tsy handiso fanantenana anao ity fizarana vaovao ity, tokony hanana ny rariny ianao na eo aza ireo teboka ratsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Modern Combat 5, ny fiheverana voalohany anay.
Manuelc dia hoy izy:
Somary marokoroko raha ny fahitako azy, mamela be dia be ny faniriana ao amin'ny fizarana multiplayer toa ny feo henonao rehefa maty ianao, ny fampiasanao ampinga sy izany rehetra izany.
Valiny tamin'i Manuelc
Eny, inona no tianao holazaiko aminao ry Luis, eny, mahatalanjona ny sary toy ny fizarana teo aloha fa raha ny lalao kosa no zava-dehibe indrindra amin'ny lalao rehetra (bebe kokoa raha miresaka lalao ho an'ny fitaovana mikasika) na ambony isika amin'ity. fizarana farany tsy maintsy ampifandraisinao maharitra (zavatra tena kiana ao amin'ny appstore), ny 8 amin'ny 10 dia toa tsy dia haiko loatra.
Miaraka amin'ny 6 mandeha dia mandaka ary mandeha fa daka satria ny lohahevitry ny lalao dia niaraka tamin'ity lalao ity hatramin'ny nanombohany, izany hoe tsy maintsy saziana mafy ity fanaovana tsirambina ity. Novidiko ilay kinova teo aloha ary hilalao 10 indrindra indrindra aho noho io antony io, ary raha "fotsiny" dia io (averiko fa io no zava-dehibe indrindra amin'ny lalao rehetra) angamba omeko 7. Fa raha ity kinova vaovao ity dia ampianao eo an-tampon'ny fifandraisana maharitra, dia milatsaka mivantana amin'ny 6 ny naoty ary tsy aoriko intsony izy io noho ireo sary mahavariana ananany.
Tsy ny zava-drehetra ao amin'ny lalao iray dia sary mahavariana, lavitra azy. Izany dia toy ny hoe manana Ferrari miaraka amin'ny motera misy seza Panda ianao; eny, ivelany dia tsara sy mahafinaritra nefa ny atiny ...
Mety marina ny anao ... fa ny marina dia tena tiako ity karazana lalao ity (mpankafy ny Call of Duty aho), ary araky ny nolazaiko, ny fanaraha-maso amin'ny fampiharana marobe dia miafara amin'izy ireo ianao.
Nisalasala be aho teo anelanelan'ny 6 sy 8 (tsy azoko atao ny mametraka 7), fa ny 6 kosa toa sazy be loatra noho ny lalao mahatalanjona toa izao, mendrika 10 raha nanitsy ny olan'ny fanaraha-maso sy ny Internet izy ireo .
Tena tiako be ireny lalao ireny. Saingy tena nanantena zavatra bebe kokoa tamin'ny lalao aho. Ny sary dia mitovy amin'ny faha-4 fa tsy dia misy vaovao momba ny lalao. Ny kinova faha-4 dia nanana zava-baovao tsangambato maro izay nahagaga ny mpilalao. Ary tsy maintsy lazaina fa tsy misy dikany ny nataon'izy ireo taminao raha ampifandraisina amin'ny Internet, mbola eo amin'ny ipad mini ahy dia tsy afaka nilalao fotoana iray aho raha tsy nilatsaka ny fifandraisana ary tsy maintsy niandry azy ireo hifandray indray aho. Tsy mbola nilalao ny lalao aho fa hatreto dia mbola tsy nahita na inona na inona tokony hialona ny kinova faha-4 aho. Azoko atao ny manisa azy io ho 7 na 8. Ho ahy dia tsy mitaky be loatra ny kinova 4.
Wico6: klone iPhone 6 izay maka tahaka ny iOS 8
Imojiapp: fampiharana hanovana ny sarinao ho emojis